प्रधानमन्त्री भन्दा गृहमन्त्रीको हाईहाई,५४ दिनमा तेस्तो के गरे ? « Himal Post | Online News Revolution
प्रधानमन्त्री भन्दा गृहमन्त्रीको हाईहाई,५४ दिनमा तेस्तो के गरे ?
प्रकाशित मिति : २०७४, १४ श्रावण १९:३२
काठमाडौं,साउन १४ ।
ऊर्जामन्त्रालयमा हुँदानै एकप्रकारको विशेष चर्चाको शिखरमा रहे जनार्दन शर्मा । गत २४ जेठमा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै गृहप्रशासनभित्र चर्चा भयो,’अहिलेसम्मको हाईहाई अब पनि उनले कायमै राख्लान कि नराख्लान ?’
खबर डवलीको सहयोगमा